के साच्चै चन्द्रमामा एलियन बस्थे ? नासाले सार्वजनिक गर्‍यो विश्वलाई चकित पार्ने फोटा! – PathivaraOnline
Home > अन्तराष्ट्रिय > के साच्चै चन्द्रमामा एलियन बस्थे ? नासाले सार्वजनिक गर्‍यो विश्वलाई चकित पार्ने फोटा!
admin August 26, 2020 August 26, 2020 अन्तराष्ट्रिय, प्रविधि	0
एजेन्सी– यही जुलाई २० का दिन चन्द्रमामा मानवले पाइला टेकेको ५० वर्ष पूरा भएको छ । मानव सभ्यता सँगै इतिहाँसकै लागि यो खुशियालीमा विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाइयो । यसबीचमा अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी (नासा) ले चन्द्रमाबारे संसारलाई चकित पार्ने केही खुलासा गरेको छ । नासाका अनुसार चन्द्रमामा प्राचिनकालमा एलियन रहने गर्थे । चन्द्रमामा एलियनको संसार रहेको नासाले केही प्रमाण पनि प्राप्त गरेको छ ।
नासाले केही दिनअघि चन्द्रमासँग सम्बन्धित केही तस्विरहरु जारी गरेको थियो । त्यसमध्ये केही तस्विरले प्राचिनकालमा चन्द्रमामा एलियन रहने गरेको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । एक तस्विरमा देखिएको वस्तुहरुलाई नियालेर हेर्ने हो भने एउटा दिशामा ब्लाक स्याडो (अध्याँरो अर्थात छाया) देखिएको छ । नासाले उक्त छायाको पछाडि एलियन रहेको प्रमाणका रुपमा त्यहाँ एक प्राचिन शहर रहेको फेला परेको जनाएको छ ।
सञ्चारमाध्यमहरुमा आएको रिपोर्टअनुसार नासाले लिएको उक्त तस्विरमा एक विशाल चट्टान जस्तो देखिने वस्तु भवनको भएको पाइएको जनाइएको छ । नासाका अनुसार एलियनले बनाउँदै गरेको उक्त भवनको निर्माण कार्य भने पूरा गर्न नसकेको देखिएको छ । त्यसैले अहिले चन्द्रमामा एलियनको बसोबास अर्थात अस्तित्व नरहेको अनुमान लगाउन सकिने बताइएको छ ।
नासाले चन्द्रमामा मानव अभियानको ५० वर्ष पुगेको अवसरमा ४ सय वटा तस्विरहरु सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा केही तस्विर भने संसारलाई चकित पार्ने खाल्का छन् । एउटा दिशामा ब्लाक स्याडो (अध्याँरो अर्थात छाया) देखिएको छ । नासाले उक्त छायाको पछाडि एलियन रहेको बताएको हाे ।
ति तस्विरहरुलाई ‘द नासा अर्काइभ : ६० इयर्स इन स्पेस’ मा पनि राखिएका छन् । सन् १९६९ जुलाई १६ तारिखका दिन नासाले एपोलो ११ अन्तरिक्षयानलाई फ्लोरिडास्थित केनेडी स्पेस सेन्टरबाट प्रक्षेपण गरेको थियो । नासाका अनुसार एलियनले बनाउँदै गरेको उक्त भवनको निर्माण कार्य भने पूरा गर्न नसकेको देखिएको छ ।
यस्तो अचम्मकाे कार! दुर्घटना हुनुपूर्व आफैं ब्रेक लगाउँछ यो कार! मदिरा पिएर चढे हुँदैन स्टार्ट! हेर्नुस आधुनिक कार!